के कुलमानको बिदाइसङ्गै लोडसेडिङ्ग्को सम्भावना बढेको हो त ? - DhanSanchar - Number 1 Digital Newsportal From Nepal
५ असोज। पछिल्लो समय विद्युत कटौती बढेको गुनासा सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन् । पूर्वसूचना नदिई घण्टौं लाइन काटिनुलाई धेरै उपभोक्ताहरुले कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँग जोडेका छन् । आम उपभक्ताको आशंका छ, अब फेरि लोडसेडिङ हुने त होइन ?
प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका अनुसार अहिले पिक आवर (विहान र साँझ)मा १२२५ देखि १२५० मेगावाटसम्म विद्युत माग छ । पिक आवरमा प्राधिकरणका आयोजनाबाट ५०० मेगावाट र करिब ५५० मेवा निजी जलविद्युत कम्पनीबाट लिइन्छ । अपुग हुने १०० देखि १८० मेगावाट भारतबाट आयात गरिन्छ । अहिलेको पिक आवरमा करिब १४०० सय मेगावाट बिजुली माग हुने प्रक्षेपण थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण उद्योग, होटल, सिनेमा हल लगायतबाट हुने माग घटेकाले माग प्रक्षेपण भन्दा निकै तल छ ।अनलाइन खबर।
“युद्ध मैदानको सिपाहीले आधुनिक हतियार प्रयोग गर्न पाउँदा युद्ध जित्न जति सहज हुन्छ त्यो हतियार नपाउँदा अलिक मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ”महेश बस्नेत
२४ घण्टामा ३ हजार ६६० जना कोरोना संक्रमणमुक्त
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ हजार २० जना कोरोना संक्रमणमुक्त
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा २० लाख बराबरको राहत सामग्री वितरण
सिन्धुपाल्चोकलाई अलाइभ ग्लाइडरले गरे सहयोग
आज ३ हजार ८२ जना संक्रमणमुक्त
यी राशी भएका जोडि प्रेमी प्रेमिका कहिले पनि छुट्दैनन
घरको वातावरणलाई उर्जाशील बनाउने उपायहरु!